Kenya: Nin Soomaali ah oo lagu waayay dacwad argagixisannimo. - Wargeyska Faafiye
Kenya: Nin Soomaali ah oo lagu waayay dacwad argagixisannimo.
Nin Soomaali Kenyaan ah oo horay loogu eedeeyay inuu wax ka ogaa qarax loo adeegsaday gaarigiisa oo ka dhacay saldhigga booliska Pangani ee magaalada Nairobi ayaa maanta la sii daayay, kaddib markii lagu waayay dacwadihii lagu soo oogay.
Ninka oo lagu magacaabo Axmed Dugal Cali ayaa xirnaa lix bil, wuxuuna ku eedeysnaa inuu taageeray, gabbaadna siiyay rag argagixiso ah.
Dacwad oogayaasha ayaa ku guul-darreystay inay maxkamadda hor keenaan caddaymo muujinaya inuu ku lug lahaa eedaha lala xiriiriyay.
Axmed Dugal Cali ayaa ah milkiilaha gaariga qarxay, wuxuu iska difaacay eedaha loo jeediyay, isagoo caddeeyay in uusan waxba kala socon arrinta gaarigiisa.
Saddex iyo labaatankii bishii April ee sanadkan ayaa gaariga Mr Dugal lagu fuliyay qarax ka dhacay saldhigga booliska ee Pangani, waxaana sida la sheegay ku dhintay labo nin oo dhallinyaro ahaa iyo labo askari oo ka tirsanaa booliska Kenya.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsKenyan leader asks UN to protect progress gained in Somalia.2 Somali men killed in Rice County crash; 4 deaths on icy Minnesota roads this weekR/wasaaraha oo baarlamaanka hor tagayoTelefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.Gudiga oo ka quustay inuu diido xildhibaan.